September 16, 2020 1168
नेपाल विद्युत प्राधिक’रणमा कुलमान घिसिगंलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्ने माग सहि’त दवाव दिन पुगेका पुण्य गौतमलाई प्रह’रीले प क्राउ गरेको छ । को रोनाको जो खिम बढेकै बेलामा सार्वजनिक रुपमा भि ड गरेको भन्दै प्रह’रीले गौतमलाई प क्राउ गरेको हो ।
पुण्य गौतम आफुलाई सामाजिक अ’भियन्ता भन्दै विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै आउने गरेका छन् । आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने गौत’मले बुधवार काठमाडौमा सार्वज’निक स्थानमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प क्राउ गरिएको हो ।
उनलाई पक्रा उ गर्दाको भि’डियो भने निकै रमा’इलो देखिन्छ । नारावाजी गर्दै सडकमा भि ड लिएर बसेका पुण्यलाई प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ । उनी आफै नेकपाका कार्य’कर्ता भएको पनि दावी गर्छन । को रोना म हामारीका बेलामा भि डभाड गरेको र को रोनाको जो खिम बढाएको भन्दै प क्राउ गरेको बताइएको छ ।
उनलाई प क्राउ गर्दाको भिडिcयो निकै रोचक र रमाइलो देखिन्छ । भि’डमा उभिएर नारा लगाएका पुण्य’लाई प्र हरीले ध के ल्दै आउँछन् । उनले यो मलाई के गरेको ? म वि’रामी छु भन्दै गर्छन । त्यती नै बेला प्र’हरीले उनलाई जुरुक्क बोकेर लिएर हिड्छन् ।
एक जना प्रह’री जवा’नले उनलाई जुरु’क्कै बोकेर हिड्न थालेपछि त्यो दृष्य हेर्नेहरु रमाइलो मानिरहेका थिए । उनलाई प्रश्न गर्ने युट्युवर’लाई पनि निकै रमाइलो पाराले जवाफ दिएका छन् ।
Prevकमला घिमिरेले गाईन् बद्री पंगेनीसँग पहिलोपटक यस्तो गीत, यती धेरै रमाइलो (भिडियोसहित)
Nextआज असोज १ गते बिहीबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
पुण्य गौतम’लाई प्रह’रीले गर्यो पक्राउ, यस्तो छ कारण ! ( भिडियो सहित )